तपाईंले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने मुख्य ५ कुरा के के हुन् ? जानी राखौ – www.agnijwala.com
तपाईंले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने मुख्य ५ कुरा के के हुन् ? जानी राखौ
मेरो नाम सतीश हो । काठमाडौंको बासिन्दा हुँ । सम्पन्न पनि छु । अहिले ४७ वर्षको भएँ । यो उमेरसम्म आइपुग्दा मेरो अनौठो अनुभव छ । त्यो के भने मसँग लामो समय मानिस संगत गर्न चाहँदैनन् । रुप, गुण, सम्पन्नता भएर पनि किन मानिसहरुसँग लामो सम्बन्ध कायम रहँदैन ?गुण भन्नुस् वा अवगुण, म खुल्ला छु । मित्रता भएपछि घर–परिवारका मात्र होइन, आफ्ना अन्तरंग कुराकानी पनि गर्छु । श्रीमतीका अनुसार मेरो यही अति खुल्लापनले नै मेरा साथीसँगीसँग लामो सम्बन्ध कायम नभएको हो । के यो सत्य हो ? मानिसले आफ्ना निकटसँग कुन–कुन कुरा भन्न हुन्छ, कुन भन्नुहुन्न ?
मनोबिद करूणा कुवँर
sdсделатьрассылк эффективнойбизнесb2b рынокcasual sex hookup siteschiappa